You are at:Home»Category: "Life Style"
ဆယ်ကျော်သက်တို့အရွယ်ဆိုတာ ဥပမာတင်စားရရင် လိပ်ပြာအဆင့်သို့ရောက်လုဆဲဆဲ ပိုးဖလံ လိုနုနယ်ပြီး အထိခိုက်မခံတဲ့ အရွယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ နောက်တစ်ချိန်မှာ အရာရာကို ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ ဒီအရွယ်ထဲက လိုတာပုံသွင်းပြီး အထူးသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ…
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေက ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ဘက်က ကြည့်ရင် အတော်လေးကို လွဲချော်နေတတ်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် ချစ်သူနှစ်ယောက် နားကျပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ဖက်တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်တာဟာ Romantic ဆန်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်…
ချစ်သူနဲ့ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ အပြန်အလှန် နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်၊ ဘဝအမောတွေကို အပြန်အလှန် နှစ်သိမ့်ရင်း ပျော်စရာတွေကိုတူတူမျှဝေနိုင်လို့ တကယ်ကိုအကျိုးထူးပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် ခရီးထွက်တဲ့အခါ ချစ်သူတွေအနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အခိုက်အတန့်တွေကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖန်တီးသင့်လဲ ဆိုတာ…
အချက်အလက်အသစ် ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ လက်ထပ်ပြီးသားမိန်းကလေးတွေက အပျိုမိန်းကလေးတွေထက် ပိုပြီး စောစောသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့တော့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
မွေးကင်းစကလေးဆိုတာ အရမ်းအေးအောင်ထားလို့မရသလို အဝတ်အစားထူထူတွေဝတ်ပေးပြီး ပူအောင်ထားလို့လည်း မရပြန်ပါဘူး။ နွေရာသီမှာဆိုရင် ဖျားနာတာက ပိုအဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအဝတ်အစားမျိုးဝတ်ပေးမလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုး ဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါ့မယ်။
မိသားစုတွေအတူတူ ခရီးထွက်ရင် ကလေးအတွက်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်
အခုလို နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ မိသားစုတွေခရီးထွက်ကြမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအပေါ် စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲပြီး မခေါ်ဘဲမနေပါနဲ့။ ခရီးထွက်တဲ့အခါ ကလေးတွေမှာလည်း ကောင်းကျိုးအများကြီးရပါတယ်။
Stress တွေကို မေ့ဖျောက်ဖို့ သီချင်းဆိုကြစို့
သီချင်းဆိုတာဟာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အပန်းပြေစေသလို ဘဝအမောတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ သီချင်းကို စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ၊ အိမ်မှာ အော်ဆိုလို့ရသလို၊ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေမှာလည်း သွားဟဲနိုင်ပါတယ်။
သင်္ကြန်မှာ ဘာတွေလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားလဲ?
နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ကို ရောက်ခါနီးတာနဲ့ အများစုက သင်္ကြန်ရောက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲလို့ ကြိုပြီးစဉ်းစားထားတတ်ကြပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာ ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အတာရေသဘင်ပွဲတော်ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ လက်ချိုးရေပြီး စောင့်မျှော်နေရတာလဲ ပျော်စရာကြီးပါ။…
အလှအပဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ပြုပြင်နည်းလမ်း (၆)သွယ်
အရေးအကြောင်း သွားစရာကရှိပြီဆို တလွဲဖြစ်တတ်တဲ့ ပျိုမေတွေရှိကြလား? ဒီလိုအချိန်မှာ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ရှိရှိနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းကင်းဖြေရှင်းလို့ရမယ့် အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်။ (၁) ချိုင်းလိမ်းတောင့်ကုန်နေပြီ ! Shopping ထွက်တုန်းက…
ကျွန်မမောင့်မင်္ဂလာပွဲသို့သွားမည်။ ကျွန်မကို ရက်ရက်စက်စက်ထားသွားခဲ့တဲ့ မောင့်မျက်နှာကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တွေ့ချင်သေးသည်။ “မေပြုံးလိုက်ရင် သိပ်လှတာပဲ” မောင်အမြဲပြောတတ်တဲ့ စကားသံချိုချိုလေးကို ခုချိန်ထိကြားယောင်နေသေးသည်။ မောင်သည် လိုချင်တာကို မရရအောင်ယူတတ်သည့် လူစားမျိုးဖြစ်သည်။…